ဘလော့ Read More လုပ်နည်း ပုံဖြင့်အစားထိုးနည်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ဒါလေးကတော့ ဘလော့မှာ read more ဆိုတဲ့နည်းပညာလေးပါ။
ဘလော့မှာ တောင်းဆိုထားတာလေးတစ်ခုပါ အရင်ကလဲ တင်ပေးးထားဘူးပါတယ်.. ဒါကတော့ ထပ်မံတင်ပြခြင်းပေါ့..
ခမ်းကောင်ချယ်ရီ: အကိုရေ...ကျွန်တော် read more ဆိုတာကို စမ်းလုပ်ကြည့်တယ်...အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှ ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပိုစ့်တွေ နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်...အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အစ်ကိုရေ...အားကိုးပါရစေ...
ခမ်းကောင်းးရေ... တစ်ခုခုမှားတာကြောင့်ဖြစ်မှာပါ.. အဆင်မပြေရင် လုပ်ထားးတာကို ပြန်ပြီး ဖျက်ကြည့်ပါ။ ရှာတဲ့ကုဒ် ထည့်တဲ့ ကုဒ်ကို ပြန်အခြေခံပြီး စမ်းကြည့်ပါ... ပို့စ် နှစ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တော့ မကြုံဘူးသေးပါဘူးးးး အဆင်ပြေပါစေ...အရမ်းခက်ခဲနေပါက.. aungsan96 ကိုအပ်နိုင်ပါတယ်.. ဒါလေးကို သုံးကြည့်ပါ။
အဆင့် 1 Template > Edit HTML > Expand Widget Templates မှာအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
အောက်က Code ကိုထပ်ရှာပါ ရှာနည်းကတော့ အထက်ပါ ပုံတိုင်းပါဘဲနော်...
တွေ့ပြီဆိုရင်အောက်က Code နဲ့သူ့နေရာကိုအစားထိုးပေးလိုက်ပါ။။
<span style='padding-top:5px;;float:right;text-align:right;'><a expr:href='data:post.url' rel='bookmark'><b>>>>
သည်နည်းကတော့ တချို့ဘလော့တွေက read more ပါနေပြီးသားပါ သည်တော့ read more ကိုဘဲရှာရမှာပါ... တကယ်လို့ ဆက်ဖက်ရန် ဆိုတာရေးထားရင်တော့ read more ကိုရှာလို့ မတွေကနိုင်ပါဘူးနော်..သတိထားစေလိုပါတယ်....
2. "Expand Widget Templates" မှာအမှန်ခြစ်
3. "Read More" ဆိုတာကိုရှာ
ပုံလင့်ကိုတော့ မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီးး ဖိုတိုရှော့နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပုံထုတ်ပြီး လင့်ယူရမှာပါ...
ကဲ ကျနော်အသင့်ရှာဖွေထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်....
(၁) သူ့ရဲ့လင့်ကတော့ ...... ( http://i.minus.com/ibjDpjPBStrhM4.PNG )
(၂) သူ့ရဲ့လင့်ကတော့.......( http://1.bp.blogspot.com/-IsXnb2aurfs/TsjiKGBs8XI/AAAAAAAAA54/vexbdWMTTrk/s1600/readmore.png )
(၃) သူ့ရဲ့လင့်ကတော့ ...........( http://1.bp.blogspot.com/-VdmtPv-5UYc/TwqJbFOEIrI/AAAAAAAAAuk/8Ks01LebB8g/s1600/Untitled-1.gif )
အောင်အောင်(မကစ) ရဲ့ ဘလော့ခရီးသည်လေးအား အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ fb like လေးတော့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါနော်.. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်...။ www.aungsanmks.blogspot.com